🥇रोजगार अन्तर्वार्तामा मुख्य गल्तीहरू
रोजगार अन्तर्वार्ता एक त्यस्तो अवस्था हो जुन सामान्यतया तपाईंलाई बढी नर्भस बनाउँदछ, यदि तपाई मापन गर्नुहुन्छ, यदि त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छ, यदि उनीहरूले तपाईंलाई थाहा नहुने चीजको माग गर्दछ भने, आदि ... त्यो अपरिहार्य हो, तर हामी तपाईंलाई केही त्रुटि सल्लाह दिन्छौं। जागिरको अन्तर्वार्तामा जोगिन जुन तपाईंलाई केहि चीजहरूको पूर्वदृष्टि गर्न मद्दत गर्दछ, र अप्रत्याशित मुद्दाहरूको अघि बढ्दछ। काम अन्तर्वार्तामा गरिएका मुख्य गल्तीहरूको साथ सुरू गरौं।
कहिले ढिला नगर्नुहोस्: यो शिक्षाको अभाव हो
खराब पहिलो प्रभावबाट छुटकारा पाउन यो धेरै गाह्रो छ। यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईको कम्पनीमा प्रवेश गर्ने बखत जागिरको अन्तर्वार्ता सुरु हुन्छ: एक रूख वा ढिलो उम्मेद्वारलाई अन्तर्वार्ताकारले तुरुन्तै लापरवाहको रूपमा लेबल लगाउँदछ। त्यो अवस्थामा, एक मात्र उपाय बाँकी भनेको आफैंलाई केही विश्वसनीय अभिप्रायले माफी दिनु हो जसले तपाईंको भनाइलाई सुधार्न सक्छ। कुनै श doubt्का बिना, यो पहिलो गल्ती हो जुन रोजगार अन्तर्वार्तामा गर्न सकिन्छ ।
कसरी लुगा लगाउने
यो उत्तम छ कि उनीहरूलाई लाग्छ कि तपाईं एकदम थोरै भन्दा निश्चित हुनुहुन्छ। प्रश्नहरु लाई: म टाई लगाउँछु? के मैले सूट लगाउनु पर्छ? यदि श doubt्का लाग्छ भने, उत्तर हुन्छ हो। यद्यपि कम्पनीलाई "युवा र अनौपचारिक" भनेर चिनिन्छ, हामीले सामिलता र गम्भीरता देखाउनु पर्छ। यदि केहि पनि हो, यो पछि देखिन्छ। अवश्य पनि, "पेन्गुइन" प्रभावको साथ धेरै सावधान। ज्याकेट वा सूट लगाउन केहि पनि छैन जुन तपाईं हराउनु वा असहज हुनुहुन्छ।
अत्यधिक आत्म-विश्वासदेखि सावधान रहनुहोस्
एक आत्म-विश्वास र एक अहंकारी उम्मेदवार बीचको फरक एक रोजगार साक्षात्कार मा कम हुन सक्छ। जसले सबै कुरा जान्ने दावी गर्दछ उसले विश्वसनीयता गुमाउँछ। हामीले उदाहरणहरू, anecdotes, आदिको साथ कथनहरू बलियो पार्नु पर्छ ... तपाईंको उद्देश्यको लागि बल दिन। र "म भाग्यमानी ..." वा "मैले मौका पाएँ ..." जस्ता वाक्यांशहरूसहित विनम्र हुन डराउनु हुँदैन। अवश्य पनि, तपाईले आत्म-अस्वीकार गर्नुपर्दैन, वा तपाईले त्यो कामको कुनै पनि विकल्प हराउनुहुनेछ।
जागिरको अन्तर्वार्ताको समयमा तनाव एकदम सामान्य राज्य हो। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण छ वा, कम्तिमा पनि, यसले हामीलाई धोका दिन नदिनुहोस्। अन्तर्वार्ताकारलाई थाहा छ कसरी स्नायु टिकहरू हेर्न सकिन्छ र यदि तपाईं सहज हुनुहुन्न भनेका लागि कदर गर्नुहोस्। शान्त रहने प्रयास गर्नुहोस्। र यदि तपाईंलाई थाहा छ कि यसले तपाईंको लागि लागत लिन्छ, त्यहाँ धेरै आराम अभ्यासहरू छन् जसले तपाईंलाई आफैलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। अर्को गल्ती अन्तर्वार्ताकारको आँखामा हेर्नु होइन : यो उसलाई हेराईको साथ चुनौती दिने बारेमा होइन, तर तपाईंबाट मायालु नजर सुविधाजनक छैन, सुरक्षाको अनुभूति दिन प्राकृतिक हुनु उत्तम हुन्छ। तपाईंले हालको, ध्यान केन्द्रित र समावेशी मनोवृत्ति कायम राख्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यो तपाईंको पक्षमा खेल्नेछ।
तपाईको पाठ्यक्रम पाठ नगर्नुहोस्
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई आफ्नो शैक्षिक र / वा पेशेवर क्यारियरको बारेमा स्वाभाविक रूपमा कुरा गर्ने ज्ञान छ। सोध्दा सावधान हुनुहोस्। यो पाठ्यक्रम पठनको बारेमा होइन यदि यो तपाईलाई मुटुले थाहा छ, त्यो पहिल्यै लेखिएको छ, तर आवश्यक भएमा थप स्पष्टीकरणहरू प्रदान गर्न। कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने कुराको अनुसार तपाईंको ज्ञानलाई अनुकूलित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् (रोजगार प्रस्तावको घोषणा अनुसार) र पाठ्यक्रमको अंशलाई मूल्यमा राख्नुहोस् जुन तपाईं सोच्नुहुन्छ रोजगारको लागि तपाईंलाई उपयुक्त लाग्छ।
आफ्नो जीवन गणना नगर्नुहोस्
यो जहाँ तपाईं शान्त हुनु पर्छ। कहिलेकाँही, रोजगार अन्तर्वार्ता उत्तम प्रगति गर्दछ , तपाईं अधिक र अधिक सहज महसुस गर्नुहुन्छ ... उत्तम। तर अधिक परिचित हुन र आफ्नो जीवनको बारे मा आफैलाई बताउन सावधान रहनुहोस्। यो अन्तर्वार्ताकर्ता हो जसले कुराकानीको लागि निर्देशन दिन्छ: व्यक्तिगत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगर्नुहोस् जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई सोध्नुहुन्न। र यदि यो गर्छ भने, अधिक जानकारी मा जानु बिना विवेकका साथ जवाफ दिनुहोस्।
चाँडै नै क्षतिपूर्तिको बारेमा कुरा गर्न सावधान हुनुहोस्
अवश्य पनि, पहिलो अन्तर्वार्तामा, प्रश्नहरू जस्तै उनीहरू कति तिर्छन्? वा तपाइँ कति दिन छुट्टी हुनेछ? तिनीहरू पूर्ण रूपमा निषेधित छन्। अवश्य पनि तिनीहरू महत्त्वपूर्ण सवालहरू हुन्, र धेरै, तर यो केवल त्यस्तो अवस्थामा हुनेछ जुन कम्पनीको रुचि हो। कामको लागि भन्दा यसको फाइदाहरूको बारेमा बढी चिन्तित हुने कसैलाई मन पर्दैन ... पछि अन्तर्वार्तामा यसका बारेमा कुरा गर्ने समय हुन्छ यदि तिनीहरूले पहिलो अन्तर्वार्ता पारित गरे पछि तपाईंलाई फेरि बोलाउँदछन्।
कम्पनीलाई थाहा छैन
कहिलेकाँही, उम्मेद्वारहरू आफूले छनौट गरेको कम्पनीको बारेमा थाहा पाउन बिर्सन्छन्। रोजगार प्रस्ताव पढ्नु पर्याप्त छैन। आज हामीसँग भएका साधनहरूसँग कम्पनी र क्षेत्रका बारे जान्नु महत्त्वपूर्ण छ, र यसले हामीलाई अन्तर्वार्ताकारले उठाएमा चुप लाग्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यो यसको प्रमाण हो जुन हामी ख्याल गर्छौं र संलग्न भएको महसुस गर्दछौं।
के थाहा छ थाहा छैन
अन्तर्वार्ताको अन्तमा , एक राम्रो अन्तर्वार्तादाता सोध्छन् यदि तपाईं संग स्पष्ट गर्न केहि बाँकी छ भने। यहाँ तपाइँ सावधान हुनुपर्दछ: यो तलबको बारेमा होईन, तर कम्पनीको बारेमा हो। कम्पनी वा क्षेत्रको अपरेशनको बारेमा पनि एक प्रश्न, सरल, तपाइँको कार्यमा तपाइँको रुचि र तपाइँको संलग्नता देखाउँदछ ।
धोखा प्रश्नहरू तयार छैन
एक अन्तर्वार्ताको विकास केहि कोडहरू द्वारा शासित हुन्छ र समस्याहरू छन् जुन बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यहाँ सधैं धोखा प्रश्नहरू हुने छैनन्, त्यो अन्तर्वार्ताकारमा निर्भर हुन्छ, तर यदि त्यहाँ छन् भने तपाईंले तिनीहरूलाई अस्थिर हुन दिनुहुन्न। तपाइँलाई रोक्नाले राम्रो प्रभाव पार्दैन। तसर्थ, तपाइँको पाठ्यक्रम मास्टिंग र तपाइँको यात्रा को एकरूपको बारेमा सोच्न तपाइँ सुरक्षा र प्राकृतिकताको अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई बेरोजगार हुनु भएको छ भने आफैलाई सीमित नराख्नुहोस्, तर त्यस अवसरमा तपाईले अरु चीजहरुका लागि प्रशिक्षण पाउनु भयो भनेर अवसर लिनुहोस् ... तपाई सकारात्मक हुनुपर्दछ र काम गर्न इच्छुक हुनुपर्दछ।
यी कार्यहरू अन्तर्वार्तामा मुख्य गल्तीहरू हुन् र अधिक सामान्य। त्यसो भए प्रत्येक केस एक विश्व हो, तर हामी आशा गर्दछौं कि यदि हामीले तपाईंलाई आवश्यक परेमा हामी आफ्नो हातमा चुर्लुम्मै डुबेका छौं। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि केहि स्पष्ट छन्, अरुले बढाइबढाइएको, र तपाई सहि हुन सक्नुहुन्छ, तर रिपोर्ट गर्नको लागि कि यो छैन। हामी तपाईंको टिप्पणीहरूको लागि पर्खिरहेका छौं र तपाईंले योगदान दिन उचित ठान्नुहुने सबै कुरा।
स्पेनमा ताजा पानीको समुद्र तट